Ummaddii Jahwareer bay ka bixdi la dahay
Cumar Suufi Cali
Waa cajiib in ummad nalagu magacaabo oo muslim sheegata oo aaminsan rabbigii weeynaa ee adduunkan uumay ee isaga maamula ee haddana aan ka dambeeynin oo aan rabin inay isaga uhogaansanto waxa uu rabo keliya. Arrintaan waxaa igu dhaliyay inaan ka qoro maqaal ee aan ugu magacdaray Ummaddii Jahwareer bay ka bixdi la dahay.
Soomaaliyeey sooma aragtaan in aanku noolnahay nolol uu baniaadamka ku noolaado tii ugu xumeeyd. Wallaalayaasha soomaaliyeedoow war maxaa inna helay oo aan la fikiri la,nahay oo aan marna inta aan fariisanno oon gacmaheenna inta aan dhafooradeena amma daamayaasheena wada saarano oon fikirno.
Wallaalayaal waa misiibo gacmaheenna ku keensanay oo aan qofna loo tiirineeynin amma la oraneeynin gudaha ayaa nalooga yimid. Wallaalayaal intaas waa iga hordhac amma introduction aan uga dhigay maqaalkeeyga. Haddana aan usoo degaandego muhiimadda aan uga danleeyahay cinwaanka maqaalkeeyga.
Ummaddii: wallaalayaal ummad waxaa layiraahdaa dad ama qolo isku af ah, isku diin ah, isku taqaaliid wada haaysta oo aan marnaba lakala sooci karin. Taana waxaan filayaa uma baahna prime example in aan raadino sababtoo ah annaga ayaa isku filan inaan farta isku fiiqno oon isku nahay hal luqad oo soomali layiraahdo, isku nahay hal diin oo layiraahdo islaam iyo waxii intaa soo raaca. Wallaalayaal waa nicmad weeyn oo looga shukriyo rabbigii doonay taas. Ummadda dhabaqo ayeey leedahay, for example culimo, caamo, aqoonyahanno, iyo waxii intaa soo raaca.
Jahwareer bay ka bixdi la,dahay: Wallaalayaal rabbi ayaa ina uumay isagaana innaga ogaal badan waxaynu nahay iyo sida aan kunoolaankarno. Waxaase loo baahan yahay in xisaabta ku darsanaa in basharku loo uumay ineey allaah cabudaan keliya eeysa ushariig yeelin in yarba ha ahaadee. Wallaalayaal waxaa kaloo jirta in basharku qaldami kara oo gaf ka dhici kara uusan ahayn mid wada toosan oo macsuum ah. Laakiin markeey arrintaas dhacdo waxaa loo baahanyahy in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo noqdo oo gacmaha leeys qabto.
Wallaalayaal ma filayo in maanta waxaan sheegayoo dhan ay ubaahan yihiin tusaalayaal sababtoo ah waan arkeeynaa gafakeenni iyo qaladaadkeenii meesha ay inna dhigeen oon naqanay ummad hal mar laga siibay ama laga tirtiray jiritaanka wal ciyaadhu billaah laakiin annagaa ayaa iska siibnay. Wallaalayaal shan ito toban sano ayaan ku soo jirnay dagaal sokeeye. Qaarkeenni baa,ba,ay , qaarkeennii cudurro dilay, heer waxaan soo gaarnay jahwareer meesha ugu dambeeysi.
Wallaalayaal waxaan kusoo koobayaa qoraalkeygan laba arrimood oo muhiim ah, tan koowaad waa inaan isqabanaa oon isu sheegnaa runta hadii aynu nahay mislimiin soomaaliyiin oo dhab ah. Tal labaad waa inaan hurdada ka toosnaa oon istigfaarta badinaa iyo last one waa inaan allaah unoqonaa bis intaas waa kifaaya waan fadhinay halsano si aan uxarxariiqno qawaaniin. Please please please aan kitaabka allah qabsano. Sidaan horey usoo sheegay ummada dhabaq beey leedahay. I am sure ducaada iyi aqoonyahanada ayaa prime example fiican ah ineey noo bilaabaan xalka haba noqdee in qori la qaato oo aan iska dhicino nimanka maanta heerkaan ina keenay oo ummaddi heerkaan soo joojiyay kama wado inaan markale islaayno laakiin waxaan kawadaa inaan allaah dartiisa aan uqumno oo diintan usoo noqono. Dhammaad.